प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यक्ष प्रश्नः अब के गर्ने, के नगर्ने ? : अरुण बराल | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
२३ जेठ, २०७३-
(समाचार टिप्पणी) । एमाले स्थायी कमिटीको शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सहकर्मीलाई प्रश्न गरे- ‘लौ भन्नोस् संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक विकासको मार्ग चित्र कोर्न अब के-के गर्ने ?
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा आफ्नो काँध नगलेको र ०७४ साल माघ ७ गतेभित्र चुनाव गराएमात्रै विश्राम लिने बताउँदै आएका छन् । सरकार परिवर्तनबारे माओवादीसँग कुनै भद्र सहमति नभएको जिकिर पनि प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका छन् ।
शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरु एमाले नेताहरुले एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने बताए । उनले अब संविधान कार्यान्वयनमै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । यसरी पार्टी र सरकारको कार्यभारबारे आफैंले प्रष्ट पारिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न बैठकमा राखे । यसको अर्थ, सरकार परिवर्तनतिर होइन कि ०७४ माघसम्म सरकार टिकाउनेतिरै एमाले नेताहरुले एकजुट भएर सोच्नुपने ओलीले आग्रह गरेको देखिन्छ ।
अब के गर्ने त ओलीज्यू ?
स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘अब के गर्ने’ भनेर आफ्ना नेताहरुलाई सोधे पनि आम जनताको ध्यान यतिबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारतिरै सोझिएको छ । बजेट पनि आइसक्यो, अब सरकारले के गर्छ ? सिंगो मुलुकको ध्यान यतातिर खिचिएको छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष विभिन्न चारवटा चुनौती देखिन्छन्ः
पहिलो चुनौतीः मधेसलाई कसरी सम्वोधन गर्ने ? मधेसी गठबन्धनले उठाएको आन्दोलनलाई हेर्ने दुईवटा सोचाइ छन्ः एउटा सोचाइ कस्तो छ भने यो आन्दोलन हुँदै गर्छ, तर संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको तयारीमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । र, दोस्रो सोचाइ के छ भने मधेसलाई सम्वोधन नगरिकन वा मधेसी दलहरुलाई सहमतिमा नल्याइकन चुनाव पनि हुँदैन र संविधान कार्यान्वयन पनि हुँदैन ।
यी दुईखाले हेराइमध्ये अब ओली सरकारले कुन विचारलाई आत्मसाथ गर्छ ? सिद्धान्ततः एमाले नेताहरु मधेसी मोर्चाले उठाएका मागलाई राजनीतिक ढंगले वार्ताको माध्यमबाटै हल गर्ने बताउँछन् । तर, व्यवहारतः मधेसीलाई सहमतिमा नल्याई संविधान जारी भएको अवस्था छ र सहमतिमा नल्याइकनै संविधान संशोधन गरिएको छ । अहिले सत्तापक्षबाट यो पनि भनिँदैछ कि संविधान संशोधनपछि मधेसका मुद्दाहरु सम्वोधन भइसके, अब मधेसले अधिकार पाइसक्यो ।
यो परिस्थितिमा अब ओली नेतृत्वको सरकारसँग दुईवटा विकल्प छन्ः यात असोजमा संविधान जारी गर्दाजस्तै मधेसी मोर्चालाई बेवास्ता गरेरै अघि बढ्नु र उनीहरुको सहमतिविनै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु । या, उनीहरुका मागलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा जोड दिनु ।
अब एमालेले केमा जोड दिन्छ ? वा केमा जोड दिनुपर्छ ? यसबारे दुईखाले विचार छन्ः एकथरि मधेसीलाई वेवास्ता गरेर अघि बढ्न ओलीलाई उक्साइरहेका छन् भने अर्काथरिले मधेसीलाई विश्वासमा नलिई संविधान कार्यान्वयन एवं राष्ट्रिय एकता सम्भव नहुने बताइरहेका छन् । ओलीले अब के गर्लान् ? हेर्न बाँकी छ ।
दोस्रो चुनौतीः प्रधानमन्त्री केपी ओलीसामु देखिएको अर्को चुनौती हो- सरकारको निरन्तरता । आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने हो भने अब प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै दुईवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, या त उनले कांग्रेस र मधेसी मोर्चासमेतलाई विश्वासमा लिएर संविधान कार्यान्वयनमा सहभागी गराउनुपर्छ, या त उनीहरुको विरोधका बावजुद सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ ।
ओलीकै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चा सहमति वा राष्ट्रिय सरकारमा आउने सम्भावना शायद प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि देखेका छैनन् । दोस्रो, बल प्रयोग गरेर चुनावमा जाँदा राष्ट्रिय एकता बलियो हैन, कमजोर बन्छ र यसले मुलुकको दीर्घकालीन हित गर्दैन । सरकारले बल प्रयोग गरेर चुनाव त गर्न सक्ला, तर मुलुकमा यसले धु्रवीकरण बढाउँछ र देश एउटा कहालीलाग्दो द्वन्द्वको सुरुङमा फस्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली यस्तो अक्करे भीरमा आइपुगेका छन् कि उनले न त आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने सम्भावना छ, न बल प्रयोग गरेर चुनाव गराउने वा संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नै छ । बरु यसैगरी ‘न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल’ जस्तो गरिरहने हो भने ०७४ माघ ७ को डेटलाइन घर्किन सक्छ र अर्को खिलराज रेग्मीको उदय हुन सक्छ ।
तेस्रो चुनौतीः माथिका दुईवटा चुनौती सामना गर्न सकेनन् भने केपी ओलीसामु अर्को प्रश्न जरुर उठ्नेछः राष्ट्रिय एकता र सहमति पनि गर्न नसक्ने अनि चुनाव पनि गराउन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमात्रै ओगटेर कतिञ्जेल बस्ने ? राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त नगरी कतिदिन हलो अड्काएर गोरु चुटिरहने ?
यस्तो किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा धेरै दिन अलमल गरिरहने हो भने संविधान कार्यान्वयन गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ । ०७४ माघ ७ को डेटलाइन गुजि्रयो भने संविधानसभाको म्याद थपेजस्तो सुविधा नयाँ संविधानले नेताहरुलाई दिएको छैन ।
यो अवस्थामा ओलीसँग दुईवटा विकल्प रहन्छन्ः प्रथमतः प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाटो छाडिदिनु । या, हलो अड्काइराखेर वा म्याद गुजारेर संविधानलाई संकटमा पारिदिनु । यसका लागि ओली निकटका कतिपय विद्वानहरुले संसद विघटनको आत्मघाती उपायमाथि पनि छलफल थालेको बुझिएको छ ।
अब प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ? सत्ता टिकाउन संसद विघटन वा राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोल्न बेलैमा राजीनामा ? यो अहम प्रश्न बनेको छ बजेटपछिको नेपाली राजनीतिमा ।
चौथो चुनौतीः भद्र सहमति । बजेट घोषणापूर्व नै ओली सरकार ढल्न लागेको थियो, तर माओवादीसँग भएको ९ बुँदे सहमतिले त्यसलाई पछाडि धकेल्यो ।
नौं बुँदेका बेला दुई पार्टीवीच भद्र सहमति भएको चर्चा छ । र, त्यो भद्र सहमतिमा अडिने कि बेइमानी गर्ने भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि खडा भएको छ । अरुलाई इमान, जमान र वचनको पक्का हुन आग्रह गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले इमान-जमानको राजनीति गर्ने कि नगर्ने ? यो चुनौती पनि उनी सामु खडा भएको छ ।
किन ठूलो हुँदैछ स्वर ?
बजेट भाषण भइसक्दा नसक्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भद्र सहमति भएको छैन, सरकार छाडिन्न, ०७४ सालमा चुनाव गराएरमात्रै हटिन्छ भन्न थालेका छन् । ‘रिजर्भ’मा बस्नुपर्ने प्रधानमन्त्री आफैं किन यसरी उत्तेजित भएर बोलिरहेका छन् ?
यसबारे एमालेकै एक नेताले रोचक टिप्पणी गरे, ‘प्रधानमन्त्री कडा देखिनुको अर्थ राजीनामा दिने लक्षण हो । निभ्ने बेलामा बत्ति निकै कडा बल्छ ।’
यसैवीच एमालेकै केपी ओली पक्षका एक शीर्षनेताले माओवादीका नेतालाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । यसको सोझो अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन्छन् भन्ने नै हो ।
आखिरमा, चुनाव गराउन पनि नसक्ने, विपक्षी र आन्दोलनकारीहरुलाई सहमतिमा ल्याउन पनि नसक्ने र पेलेर अगाडि बढ्न पनि नसक्ने हो भने राजीनामा नदिएर के गर्ने ? के अड्किएको अनौ समातेर ०७४ माघसम्म उभिइरहने ? जवाफ दिने जिम्मेवारी सत्तारुढ एमालेकै नेताहरुको काँधमा छ ।
२०७३ जेठ २२ गते १९:५२ मा प्रकाशित
Posted by admin on Jun42016. Filed under Breaking News, दृष्टिकोण, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry